ZTE Iceberg ၏ဒီဇိုင်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နှစ်ထပ်ခေါက်ထားခြင်းကိုပြသသည် Gadget သတင်း
ZTE Iceberg သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နှစ်ချက်ရှိလိမ့်မည်
Eder Esteban | | မိုဘိုင်း, NOTICIAS
Notch သည် Android တွင်အလွန်ဖက်ရှင်ကျသည်။ သူတို့၏ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိအမှတ်အသားတွင်အမှတ်တံဆိပ်မည်မျှရှိသည်ကိုလပေါင်းများစွာတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဤသည်အသုံးပြုသူများအားလုံးကြိုက်တက်အဆုံးသတ်မထားဘူးပေမယ့်။ ဒါပေမယ့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကဆက်လက်အသုံးပြုကြသည်။ ယခု ZTE သည် ZTE Iceberg နှင့်ပူးပေါင်းရန်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့ကတစ် ဦး အတန်ငယ်အထူးသဖြင့်လမ်းအတွက်လုပ်ပေမယ့်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနှစ်ဆထစ်ပေါ်လောင်းလောင်းလို့ပဲ။
ZTE Iceberg ၏ဒီဇိုင်းကို၎င်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံဖြင့်ဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်သည်။ ဤပုံများတွင်အမှတ်တံဆိပ်သည်မြင်ကွင်းပေါ်ရှိနှစ်ချက်တုံးပေါ်တွင်အံ့အားသင့်စေပြီးအလောင်းအစားများကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။ ထိပ်ဆုံးနှင့်အောက်ခြေနှစ်ခုလုံး။ အသစ်တစ်ခုကိုအစွန်းရောက်ဖို့ထစ်၏ဖက်ရှင်ယူခြင်း။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒါဟာအတော်လေးကြီးမားတဲ့ထစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ အခြား Android မော်ဒယ်များတွင်သေးငယ်ပြီး ပို၍ သတိပညာရှိသော notch ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်နှစ်ဆဖြစ်သည့်အပြင်၎င်းသည်အတော်လေးကြီးမားသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းကိုမနှစ်သက်တဲ့သုံးစွဲသူတွေသေချာပါတယ်။
၎င်းသည် ZTE Iceberg ၏တစ်ခုတည်းသောအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဖန်ခွက်ကိုယ်ထည်ပါသည့်ဖုန်းသည်၎င်း၏ထောင့်များကိုအာရုံစိုက်စေသည်။ စက်၏ထောင့်များသည်အဝိုင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ၎င်းကိုကာကွယ်သောဖန်ခွက်ကပိုကြာသည်၊.
ဤသည်အတန်ငယ်ပိုင်ထိုက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ သို့သော် ZTE Iceberg သည်အသုံးပြုသည့်အခါကိုင်ဆောင်ရမည့်အဆင်ပြေဆုံးဖုန်းမဟုတ်ဟုခံစားရသည့်အပြင် ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အထူးသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ဒီဇိုင်းကိုအာရုံမစိုက်ဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အနောက်ဘက်တွင်ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်လက်ဗွေဆင်ဆာတစ်ခုပါရှိသည်.
ဒါဟာအစကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် ZTE Iceberg သည်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်မျက်နှာဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်း၏ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာမျှမသိသေးပါ။ ၎င်းသည်ယခုနှစ်အကုန်သို့မဟုတ် ၂၀၁၉ တွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုပြောရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်နေရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » ZTE Iceberg သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နှစ်ချက်ရှိလိမ့်မည်
လက်တော့ပ်ထဲရှိ SSD တစ်ခုအတွက် HHD ကိုအလွယ်တကူမည်သို့အစားထိုးနိုင်သည်
သူတို့ဟာ VEVO ရဲ့ YouTube အကောင့်ကိုဖောက်ထွင်းပြီး Despacito တွင်သမိုင်းတွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးကူးယူနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုဖျက်ပစ်သည်